Gianluigi Buffon oo xalay ku biiray Boqoleyda Champions League – Gool FM
Gianluigi Buffon oo xalay ku biiray Boqoleyda Champions League
(Turin), 03 Nof 2016 –Goolhayaha Khabiirka ah ee kooxda Juventus ee Waddanka Talyaaniga Gianluigi Buffon ayaa xalay ku biiray ragga galay taariikhda Koobka Champions League, kaddib markii uu dheelay ciyaartiisii 100′ ee Tartanka Horyaallada Yurub kulankii ay Juventus 1-1 la gashay Lyon ee ka tirsanaa Qaybta (H).
Guushaasi ayuu Buffon oo 39 jir ah la wadaagay 29 ciyaartooy oo qura kuwaas oo gaaray darajadaasi, waxaana goolhayeyaasha Boqoleyda ah ka mid ah Goolhayihii hore ee Real Madrid ee xulka Spain Iker Casillas.
Goolhaye Casillas oo haatan u ciyaara kooxda FC Porto ee Porgugal ayaa isagu xalay saftay kulankiisii 160′ ee Champions League ciyaartii ay Porto 1-0 kaga badisay Club Brugge.
Gigi Buffon makes his 100th #UCL appearance (group stage – final) 
Miyuu Sergio Aguero Man City ka aadayaa Real Madrid?
Kooxdii ugu xumeyd Champions League ee toddobaadkan oo la soo saaray